အဆီကျအသားကျစ်ဆေးနည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အဆီကျအသားကျစ်ဆေးနည်း
Posted by htet way on Feb 11, 2012 in Health & Fitness | 21 comments
စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ အ၀လွန် သူတွေ မရှင်းတာရှိပါက
ဖုန်း0973234101 ကိုမေးပါခင်ဗျား။ဒီဆေးကို ချက်ချင်ရင် ကုန်ဈေးတန်းလမ်းမှာ ၀ယ်ယူလို့ရပြီး မည်သည့်ပရဆေးဆိုင်တွေမှာ မဆိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ရှားဇောင်းလက်ပတ်ကတော့ အိုးနဲ့ စိုက်တာပါ
ဆရာထက် နည်းပေးတာ ကောင်းပါတယ်။
ဒီထက်ပိုကောင်းတာကတော့ ဆရာထက် ဆီ မှာ ၀ယ်ချင်သူတွေ စာရင်းပေးပြီး ဆေးမှာ လိုက်ရင် ပိုကောင်းလေးမလား တွေးမိတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဆရာထက်ဝေးဆီပဲစာရင်းပေးပြစေ။ ဆရာကိုယ်တိုင်ဖော်တော့မမှားတော့ဘူးပေါ့။
အပေါ်က အကိုကြီးဆူးပြောသလိုပဲ ဆရာထက်ကိုယ်တိုင် ဖော်စပ်ပြီးရောင်းရင် ၀ယ်ယူအားပေးကြမည်မှာ မလွဲပင်ဖြစ်ပါကြောင်း
ကိုယ့်ဘာသာဆေးစပ်ဖို့ က မလွယ်ဘူးခင်ည..အဲဒါကြောင့်ပါ
ဟုတ်ပ..။ဆူးပြောတိုင်းအတိုင်းဆိုရင်ကောင်းမှာဘဲ။ ကိုထက်ဝေးအရင်ပြောတဲ့ နည်းလေးလုပ်ကြည့်တာမဆိုးဘူးဘဲ။ ကြားထဲမှာနေမကောင်းဖြစ်နေတာနဲ့ ခဏ၇ပ်ထားရတယ်။
ဆရာထက်ဆေးဖော်ဖြစ်ရင် အားပေးမယ့်သူတွေ စာရင်းထဲမှာ တို့ထားလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကလည်း တိုင်းရင်းဆေးကို သုသေသနလုပ်ရတာဝါသနာကြီးပါတယ်။
ဆရာထက်ရေ – တကယ်ဘဲ ဆေးဖော်ပြီး ဈေးကွက်ကိုသွင်းသင့်တယ်။
အဲဒီလိုမျိုး တိုင်းရင်းဆေး စစ်စစ်တွေ ဆို လူတွေ အသေအချာကို အားပေးမှာ သေချာတယ်။
ပြည်ပက လူတွေလဲ ကိုယ့်ပြည်က ဆေးတွေ ဆောင်ပြီး သုံးကြတာမှ အရမ်းဘဲ။
အားပေးတယ် ဆရာထက် ရေ။
အစုစပ် ဝိုင်းလုပ်ကြဖို့တောင် ကောင်းတာ။ :-)
ဆေးအမယ်ထဲ.. ရ။ ကြံ့သွေး ၃ကျပ် ဆိုတာတွေ့တယ်..
တကယ့်ကြံ့သွေးလား.. တခုခုကိုညွှန်းတာလား သိချင်လို့…
ကြံ့ဆိုတာမျိုးက..ရှားပါးသတ္တ၀ါလေ…။ မွေးယူဖို့လည်း အင်မတန်ခက်တာမျိုး..
ဆေးကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်. စမ်းသပ်ခံမဲ့.. လူတရာကို.. အခုဆေးတိုက်ပြီး….တနှစ်လောက် သုတေသနပြု.. ရလဒ်ကို စာထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်..
. အဲဒီသုတေသနရလဒ်နဲ့.. ငွေထည့်ဝင်.. ရှယ်ရှာပါမယ့်သူတွေရှာလို့ရတယ်..။
၁၀၀မှာ ၆၀က.. အဆီကျအသားကျစ်သွားတယ်ဆိုရင်.. ကျုပ်လည်း အစုစပ်ပါမယ်..။
ဆရာကရဝေး အနော့ အရပ်ရှည်ချင်လို့
အခု အရပ်က ၅ ပေ ၉ ဖြစ်နေတယ်
၆ပေ ကျော်အောင် ဘာဆေးစားရမလဲ ဆရာထက်။
အဆီကျဆေးက ဆရာထုတ်ရောင်းရင် မိုက်တယ်ဗျ
ဒါနဲ့ တင်းတိပ်နဲ့ မှဲ့ခြောက်ပျောက်ဆေးလေး ပြောပြပါအုန်း။
ပရဆေးဆိုင်ကိုသွားရင် ဆိုင်ကနေ ကြံ့သွေး အတွက် အစားထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်က ရှေးယခင်ဆေးနည် မှန်ကိုဖေါ်ပြပေးတာပါ။
ကျွဲသွေးကို အစားထိုးပါတယ် တခါတရံမှာ ပရဆေးတွေကို အစားထိုးရတာရှိပါတယ်။
ဆေးထုတ်တာက ရှယ်ယာမလိုလောက်ပါဘူး။တစ်နှစ်လည်း မလိုလောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်က စမ်းသတ်ထားပါတယ် အခုလည်း မေ၇ာင်းသေးပါဘူး။
ပိန်ဆေးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ အဆီကျ အသားကျစ်ဆေးပါ။စနစ်တကျ ဆောင်းပါး
ပါအတိုင်းနေထိုင် မယ်ဆိုရင် ဆေးလည်းသောက်မယ်ဆိုရင် ကျပါတယ် ဗိုက်လည်း အတိုင်း
အတာတစ်ခုထိချပ်ပါကြောင်းလက်တွေ့ စမ်းသတ်ပြီးထားပါကြောင်းနှင့် လိုအပ်သော
အချက်များလည်း ထပ်မံဖြည့်စွက် နေပါကြောင်းရိုသေစွာ ပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
သူကြီးမင်း၇ဲ့ အကြံပြုချက်ကိုလည်း ဂုဏ်ယူစွာ လက်ခံပါတယ်။
ကျွဲသွေးမရ ကြောင်သွေးတော့ မလုပ်နဲ့နော် ဆရာဝေး…။ အခြား တနင်္လာနံ အကောင်တွေ အများကြီးရှိတယ်။
….ဆေးကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်. စမ်းသပ်ခံမဲ့.. လူတရာကို.. အခုဆေးတိုက်ပြီး….တနှစ်လောက် သုတေသနပြု.. ရလဒ်ကို စာထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်…
စနစ်တကျ သုတေသနလုပ်ဖို့ စာရင်းဇယား၊လိုအပ်မယ့် အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းမယ်ဆိုရင် ကူပေးချင်ပါတယ်။
(အဲဒီထဲမှာ မူလ အလေးချိန်၊နေထိုင်စားသောက်ပုံ စနစ်ကျမကျ ၊အပတ်စဉ် ပေါင်ချိန် စတာတွေ ပါထည့်လုပ်မှ အမှန်သိရပါမယ်)
လူ ၁၀၀ အတွက် ၁နှစ်စာ ဆိုရင်တော့ ဆေးဖိုး မနည်းဘူးနော်။
အဖွဲ့ အစည်း မတောင့်တင်းရင် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။
စိတ်တူ ကိုယ်တူ ပူးပေါင်းပေးမဲ့သူတွေ ရှိအုန်းမှနော်.. တွေးကြည့်လိုက်တာ အဆင့်တွေ အများကြီးပဲ..
ဒေါက်တာ ကူမယ်ဆိုရင်တော့ တအားအဆင်ပြေမှာပါ။
၁။ နံနက်စာ စားပြီးတိုင်း ရေနွေးသောက်ရန်။
၂။ နံနက်စာကို ၁၂နာရီ မထိုးမှီ စားရန်
၅နေ့လည်မအိပ်ရန် နံနက်စောစောအိပ်ယာထ၇န် ရေတစ်ဝသောက်ရန်ပြောပြီး ဆေးကျွေးခဲ့ပါတယ်။
ညစဉ် ဗိုက်နှင့်ကျောကိုဆေးနှင့် သံပုရာရည် ရောစပ်လိမ်းရန် ဗိုက်စည်းရန်ပြောဆို
ခဲ့ ရာ ထူးထူးခြားခြားဗိုက်ချပ်ခဲ့ပါတယ် ဒေါက်တာရေ..။
လူတစ်ရာတော့ ဆူးပြောသလိုဆေးဖိုး ကျခံစမ်းရန် မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း
အဲဒီဆေးမျိုးက.. နိုင်ငံခြားကို.. အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေက.. အမျိုးသမီးတွေကို.. ဒါရိုက်ဟစ်နိုင်တာပါ..။
အဲဒါဆို.. လူသားနဲ့စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးကြောင်း.. ဘေးထွက်ဆိုကျိုးမရှိကြောင်း.. ဘာညာ… အသိအမှတ်ပြု.. စာတွေလိုတာပေါ့…။
မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးမညံ့ကြောင်းလည်း ပြနိုင်… လူသောင်းပေါင်းများစွာကိုလည်း.. စိတ်ချမ်းသာရာရစေနိုင်တာမို့.. ကောင်းတဲ့..သမာအာဇီဝ..ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ပါ….။
နည်းနည်း.. အားစိုက်ပြီး.. စံနစ်တကျ… လုပ်ကြည့်စေလိုပါတယ်..။
ဒေါက်တာပဒုမ္မာတို့လို.. ဆရာဝန်တွေကူရင် ပိုမြန်မြန်မှန်မှန် ဖြစ်မှာပါ…။
လူ၁၀၀ ဆေးဖိုးဘယ်လောက်ကျမလည်း တွက်ကြည့်ပါလား..
ကြားထဲက.. လူ၁၀ယောက်ကို.. သုသေသနလုပ်ထားတာနဲ့စပြီး.. ဆေးဖိုးအတွက်.. ကုန်ကျမှာကို.. အစုစပ်ခေါ်… ပြီးမှ… ၁၀၀စာကို စမ်းသပ်လည်းရတာပဲ…
တဆင့်ဆီ.. တင်သွားလည်း ရတာပေါ့..။
လွန်ခဲ့တဲ့.. ၅နှစ်လောက်က.. အယ်လ်အေမှာ.. တရုတ်ကုမ္ပဏီတခု.. တရုတ်တိုင်းရင်းဆေး(ပိန်ဆေး)ကို.. ယူအက်စ်မှာ.. ပြန်သုတေသနပြုပြီး.. ပါကင်ကောင်းကောင်းနဲ့… ရောင်းတာမြင်ဖူးတယ်..။
ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်က..MD ( Medical doctor) ဆရာဝန်လေ..။
ကြည့်ရင်းနဲ့ကို…၄-၅နှစ်နဲ့.. ဘေးအခန်းတွေငှား..တလွှာလုံးအခန်းတွေငှား.. နောက်ဆုံး.. တခြားနေရာပြောင်းသွားတဲ့အထိ.. ကြီးကျယ်သွားတာပဲ…။
.. ဂျပန်ကားလေးကနေ… Maybach ကိုပြောင်းစီးတာ…မျက်မြင်ပဲ..။ Maybach တောင်မှ..သူ့ဆေးတွေကုန်တင်သလိုတင်ပြီး.. လိုက်သွားနေတာလေ…။
မားကတ်တင်း နည်းပညာကို လေဒီဂီဂီ ကို ခန့် ထားပြီးတော့ ရှောက်သီးဆေးပြား ရောင်းတဲ စိန်ပေါက်ပေါက် ကို ရှောက်သီးဆေးပြား ရောင်းတဲ့ အဆင့်ကနေပြီးတော့ အဆီကျဆေး ရောင်းတဲ့ အဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးလိုက်လည်း မဆိုးဘူး။ သမီးယောင်းမတွေ တူတူ လက်တွဲ လုပ်လို့ အဆင်ပြေနိုင်တယ်။
သုတေသနလုပ်ဖို့ ဇယားပုံစံလေး post တင် ထားတယ်။
ဆရာထက်လည်း ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ ကိုယ်အောင်စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ပြင်ပါ